Gadra tafatsoaka tao Vohitany « Nisy tsikombakomba »
Fitadiavana asa Sakana ho an’ny tanora ny teny vahiny sy ny tsy fahasahiana
Nisy ny fanomezana tolotr’asa ho an’ireo tanora manana diplaoma bakalorea no ho miakatra nokarakaraina fikambanana As’sidus tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely omaly.
Fitokanana ny lalana Profesora Zafy Albert Efa tomombana ny fikarakarana
Taorian’ny faneken’ny filankevitra monisipaly eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny hanomezana anarana ny lalana miainga eo Pulman Ivandry,
Olom-pirenena ankehitriny Sarotra atoro, sarotra tenenina, mora tohina,…
Atony maro no mahatonga ny olona saritra tenenina sy atoro ary mora tohina, hoy ny mpampianatra sady mpanabe iray.
Mpamboly lavanila any Antalaha Velon-taraina amin’ny ataon’ny mpitandro ny filaminana
Mampitaraina ireo tantsaha mpamboly lavanila any amin’ny Distrikan’Antalaha ny fanamparam-pahefana ataon’ny mpitandro ny filaminana any amin’ny kaominina sasany tahaka ny any Antananambo raha ny tatitry ny solombavambahoaka Nasira Julien izay voafidy tany an-toerana.
Madagasikara-Indonezia Ambany ny tahan’ny fifanakalozana ara-barotra
Ambany ny tahan’ny fanafaran’entana sy ny fifanakalozana ara-barotra ataon’i Madagasikara any Indonezia amin’izao fotoana izao nefa maro be ireo sehatra azo trandrahana sy ahafahana mampiasa vola eo amin’ny sehatry ny varotra.
Hamirifiry mandritra ny telo andro Efa vonona amin’ny akanjo mafana ny olona
Araka ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetr’andro, dia hamirifiry ary hangatsiaka, hidina ambany dia ambany ny maripana amin’ireo faritra eto Madagasikara,
Niaiky ny tale jeneralin’ny fandraharahana ny fonja eto Madagasikara, Didier Djibril Camarade, fa nisy tsikombakomba tao matoa nisy iny lositra na fitsoahana gadra nitranga tany Vohitany iny.
Nisy nahavita heloka bevava ireo tany Toliara ary ireo voafonja dia efa nisy fanapahana hamindra azy aty Tsiafahy. Araka ny tatitra na « élement » voaraiko, hoy hatrany ny tenany, dia nisy finiavana hampandositra ireo voafonja. Nisy resaka tsy nazava tao talohan’ny tsy naha tao intsony ny voafonja ny maraina. Izay no azo ambara, hoy ity tale jeneraly ity.